UbuProtestanti kunye nemisinga
Zinobunzima obungakanani iintsimbi zecawa?
Uluhlu Ixabiso: $7.99 Ixabiso: $6.99 Ugcina: $1.00 (13%) Ingakanani ubunzima bentsimbi? Iintsimbi ukusuka kwi-10 ukuya kwi-intshi ezili-15 ububanzi zinobunzima ukusuka kwi-30 ukuya kwi-75…
Ngaba umsitho womtshato weBhayibhile?
Umele abonise "iimpawu zobuntombi" (igazi kumashiti ngentsasa elandelayo), kodwa akukho mfuneko enjalo kumadoda. 4) Akukho msitho womtshato…
Ubuzile: Ngubani owagxothwa ecaweni?
NgoJanuwari 3, 1521, uPopu Leo X wakhupha incwadi kapopu ethi, Decet Romanum Pontificem, emgxothayo uMartin Luther kwiCawa yamaKatolika. Ngubani ogxothwayo kubuKatolika...
Umfundisi uChris waqala njani ubulungiseleli bakhe?
UChris Oyakhilome waqala ubulungiseleli bakhe bobuKristu ngelixa wayefunda kwiYunivesithi yase-Ambrose Ali, e-Ekpoma e-Edo yaseNigeria. Ubulungiseleli bakhe baqala njengoBudlelwana beLoveworld kwaye yayiza...
Impendulo eKhawulezayo: Ithini iBhayibhile ngokufumana uncedo kwabanye?
IBhayibhile ithi uThixo uthanda umphi ochwayitileyo (2 Korinte 9:7) yaye uYesu wafundisa ukuba kulunge ngakumbi ukupha wandule ke ukwamkela (IZenzo 20:35). … Ukwazi...
Nguwuphi umzekelo wonqulo lwasekuhlaleni?
Imizekelo yeenkolelo zonqulo lwasekuhlaleni ibonakala kumazwi asetyenziswe kuphando anjengala alandelayo: “IMerika sisizwe esinyulwe nguThixo namhlanje.” … “Iiholide njengeyeSine…
Zeziphi iicawa ezinganiki malungu?
AmaNgqina kaYehova adla ngokugqalwa njengakuchasayo ukunikela ngenxa yenkolelo yawo enxamnye notofelo-gazi. Nangona kunjalo, oku kuthetha ukuba lonke igazi kufuneka lisuswe kwi…
Ibaluleke ngantoni iBhayibhile kubomi bam?
ISibhalo sisinika izisombululo kuzo zonke iimeko zobomi. Ngelixa iLizwi likaThixo lisifundisa ukuba sithande neentshaba zethu, likwasilumkisa ukuba thina...
Impendulo eKhawulezayo: Inkolo ilubangela njani ungquzulwano ekuhlaleni?
Abantu abaneembono ezibaxiweyo ngonqulo badla ngokuchaza izenzo zabo njengokusindisa ihlabathi kumaqela angendawo. … Abantu abasebenzisa inkolo ukudala impixano baphinda-phinda le nkolelo kweyabo…
Impendulo eKhawulezayo: Ngaba abalandeli bobuntu baba negalelo njani ekwenzeni buthathaka kweCawa yamaKatolika?
Abalandeli beRenaissance bafak’ isandla njani ekwenzeni buthathaka kweCawa yamaRoma Katolika? Babekholelwa kwingcamango ekhululekileyo yaye bethandabuza iinkolelo ezininzi ezamkelweyo. … Ukuthengisa nokuthenga…
1 2 ... 1,900 Okulandelayo
Molo, igama lam ndinguColleen. Kwiblogi yam, ndithetha malunga nesikhokelo sobuKristu njengeProtestanti kunye neecawa ezizimeleyo ezizenzayo.
Ibhalwe phi eBhayibhileni ukuba uYesu nguNyana kaThixo?
Liliphi igama esifanele sibhaptize ngalo?
Umbuzo: Uthetha ukuthini uLevi eBhayibhileni?
Ithini indima yoMoya oyiNgcwele kubomi nakuthumo lwecawe?
Eyona mpendulo ilungileyo: Yayivela phi yonke igolide eseBhayibhileni?
Zingaphi iinguqulelo zeBhayibhile ze-KJV ezikhoyo?
Ngaba oonongendi banokuba yiCawa yaseTshetshi?